हिजो जनसत्ता थियो, आज दलाली सत्ता छ - AahaSanchar
Home आहा कुराकानी हिजो जनसत्ता थियो, आज दलाली सत्ता छ
नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बिभिन्न समय चर्चामा आउने गरेको छ । स्थानीय तथा प्रदेश चुनाबका बेला सक्रिय रुपमा चुनाब बहिस्कार अभियान चलाएर होस वा बेलाबेला पुनः क्रान्तिका लागि बन्दुक उठ्न सक्छ भन्ने जस्ता अभिब्यक्तिका कारण पनि सरकारी सुरक्षा योजनामा समेत चुनौति बनेर आउने गरेको छ । ठाउँठाउँमा जनसरकार गठन, भ्रष्टाचारी, माफिया र कालोबजारी गरेको नाममा कालोमासो दल्ने सहितका जनकारबाही पनि नेकपाले गर्दै आएको छ । नेकपा रुकुमको सेक्रेटरीमा पनि एउटा चर्चित पात्र नै छन ।
तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोमानसिंह कार्कीलाई सर्बोच्च अदालत परिसरमै कालोमासो दलेर चर्चा कमाएका चन्द्र बुढा । रुकुम पश्चिम आठबिसकोट नगरपालिका ८ घर भएका बुढा नेकपा रुकुमलाई गतिशिल बनाउन निरन्तर लागिरहेको बताउछन । नेकपा रुकुमको पछिल्लो राजनीतिक गतिबिधी, आगामी योजना, पार्टीको नाममा उठिरहेका चन्दाआतंक प्रसंग र स्थानीय सरकारप्रतिको धारणाका बिषयमा उनै बुढासंग आहा संचार साप्ताहिकका सम्पादक मेगराज खड्काले गरेका आहा कुराकानी
नेकपा रुकुमले जिल्लामा हाल के कस्तो गतिविधि गरिरहेको छ ?
हामी नियमित राजनैतिक कामकाज संगै पार्टी केन्द्रले तर्जुमा गरेको ३ महिने मेची महाकाली जनजागरण अभियानमा व्यस्त छौं । यतिवेला हामी दलाल संसदीय पूँजीवादी राज्यसत्ता र प्रणालीको खारेजीका लागि अहोरात्र खटिरहेका छौं । हामीले यो समय अवधिमा एकिकृत जनक्रान्तिले माग गरेको राजनैतिक, वैचारिक, सांगठानिक, संघर्ष, विज्ञान प्रविधि र सूचना सञ्चार क्षेत्रको विसका र मजबुतीकरणका लागि नयाँ अध्ययन, अभ्यास र अनुसन्धानमा छौं । आम पार्टीपंक्ति र शुभ चिन्तकहरुलाई जोड्दै वैज्ञानिक समाजवादी सत्तामा गोलबन्द हुन विशेष अपिल गर्दै हामी जनताको घर आँगनमा पुग्ने र जनसम्बन्धलाई विस्तार गर्ने कार्य योजना अन्तरगत आफ्ना काम कार्वाहीलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । यो विचमा पार्टी जनवर्गीय संगठनका बैठक, भेला, सम्मेलन र सत्ताका अधिवेशन लगायत राष्ट्रघाती जनघाती प्रकृतीका हर्कतका विरुद्ध खासगरी विभिन्न क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, महंगी, दलाली सत्ताको गुणड़ागर्दी र अनियमीतताका विरुद्धमा जनकार्वाहीलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छौं ।
तपाईंको पार्टीले देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा जनसरकार गठन गरेको सुनिन्छ । रुकुम जिल्लामा यसको अवस्था कस्तो छ ?
हो, हामीले यो दलाली सत्ताको विकल्पका रुपमा यो देशमा जनताको सत्ता निर्माण गरेका छौं र हाम्रो जिल्लामा पनि जन उत्तरदायीकारी जनपरिषद् क्रियाशिल छ । अहिले हामी यसैको दोस्रो अधिवेशनको तयारीमा पनि जुटिरहेका छौं ।
तपाईंको जनपरिषदले पार्टी संरचनाको रुपमा मात्र काम गर्छ की अरु काम पनि ?
यो जनसत्ता संचालन गर्नाका लागि गठन गरिएको जनपरिषद् हो । यो सत्ता सञ्चालनको संरचनाको रुपमा रहन्छ । यसले आफ्नो नीती तथा कार्यक्रमहरुलाई लागु गर्दै जनता र राष्ट्रको सेवामा समर्पित हुने लक्ष्य राख्दछ ।
तपाईहरु भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघाती, जनघाती र विभिन्न आरोप लगाएर कालो मोसो दल्ने सम्मका गतिविधि गरिरहनु भएको छ । तपाईंहरुको त्यस्तो गतिविधिको कारणले सरकारले सार्वजनिक मुद्धा लगाउने, प्रहरीको हिरासतमा थुन्ने जस्ता काम गरेर ठिक पारिहेको छ । यस्तो काम दिर्घकालिन रुपमा संभव छ र ?
संभव मात्र होइन अनिवार्य छ । हो तपाईले भने जस्तो यो देशका नामुद दलाल , भ्रष्ट्रहरुलाई कार्वाही गर्दा, राष्ट्रघाती र जनघातीहरुको विरुद्धमा जनहितकारी संघर्ष गर्दा, देशको सिमा मिचिदा त्यसको प्रतिरोध गर्दा सरकारले हामीलाई दमन धरपकड र हिरासतका काल कोठरीमा कोच्ने गरेको छ । यो त दलाल संसदीय सत्ताको मूल चरित्र नै हो ।
त्यसैले यो सत्ताको खारेजीका लागी हामी एकिकृत जनक्रान्तिको महासंग्राममा जुटेका छौं । त्यसैले हामीमाथि जतिसुकै चर्को दमन र षड्यन्त्र भए पनि हामी यो राष्ट्रघाती , जनघाती र विभिन्न क्षेत्रमा मौलाएको दलाली हर्कतका विरुद्ध जनताको तहवाट आउने निवेदन अपिल र आग्रहलाई मनन गर्दै जनकार्वाहीलाई थप शसक्त र प्रभावकारी बनाएर लगिने छ । यो कुरा संभव मात्र होइन अनिवार्य छ । यसमा नेपालको सुरक्षा निकायको सहयोग, सद्भाव प्रशस्त मात्रामा मिलेको छ । यस्ता जनहितकारी संघर्षमा सुरक्षा निकायसंग हाम्रो राम्रो सहकार्य छ । यद्यपी केही वाध्यताका विचवाट केही घटनाहरु घटेका छन् । जसलाई हामीले स्वभाविक रुपमा ग्रहण गरेका छौं ।
तपाईंको पार्टीले सैन्य अभ्यास सहितको युद्धको तयारी अर्धभूमिगत तरिकाले गरिरहेको छ भन्ने खवर सुनिन्छ के यो साँचो हो ?
यो कुरा क्रान्तिकारी पार्टी, निती र नेतृत्वलाई जनताबाट अलग्याउने ध्येय र उद्देश्यका साथ संसदवादी दलालहरुले फिजाएको भ्रममात्र हो । साँचो कुरा के हो भने एकिकृत जनक्रान्तिको घनिभूत तयारीमा हामी जुटीरहेका छौं । यसको मतलव यो देशको उन्नती, समृद्धि र स्वाधिनताको खातिर वैज्ञानिक समाजवाद अनिवार्य बनेकाले यसको स्थापनाका लागि दलाली सत्ताको ध्वंसको लागि सबै प्रकारका चुनौतिसँग जुध्न आवश्यक तयारीको कुरा हो । यो अर्धभूमिगत नभएर खुल्ला रुपमा जनताको काखमा रहेर गरिरहेको कुरा हो ।
अवको क्रान्ति दलाली प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हो । यो लुकाइएको विषय होइन । यो त गाउँ देखि शहर शहरदेखि गाउँसम्म समतामूलक, न्यायपूर्ण समाज र सभ्य संस्कृतीको निर्माण गर्ने युगान्तकारी पहलकदमी हो । यो खुल्ला र स्पष्टरुपमा गौरवका साथ देशभक्तहरुले गर्ने महान् कार्य हो । न यो वन्दुकको कुरा हो नत युद्धको कुरा नै वरु अधिकार र परिवर्तनको विषय हो ।
२०५२ सालमा माओवादीले शुरु गरेको जनयुद्धमा तपाईंको पार्टीका अधिकांश उच्च नेताहरु सहभागी थिए । दशक लामो शान्ति प्रक्रियामा पनि सहभागी हुनु भयो । जनयुद्धमा सहभागी भएका धेरै घाइते अपाङ्गहरुले पार्टी र राज्यले आफूहरुलाई हेरेन भनेर असन्तुष्टि जनाइरहेका देखिन्छन् । तपाईंको क्रान्तिलाई फेरी जनताको साथ रहला त ?
तपाईंले भनेजस्तो हाम्रो नेतृत्व निरन्तर रुपमा युद्ध र क्रान्तिको जटिल जटिल यात्राहरुमा जनताको राजनैतिक अधिकार सुनिश्चितताको लागि थुप्रै जोखिमहरुसँग खेल्दै आउनु भएको छ । शहिद, घाइते, वेपत्ता योद्धा र श्रमिक जनताको साझा सपनालाई पुरा गर्न हामी फेरी नयां स्तरवाट आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि नहट्ने संकल्पका साथ अगाडि वढेका छौं । यसमा सबैको साथ सहयोग मात्र होइन सक्रिय सहभागिता रहेको छ र रहेने छ । किनकी क्रान्ति नेपाली जनता र राष्ट्रको नयाँ भविष्य हो ।
यो हामी सबैको साझा विषय हो । क्रान्तिको गर्भमा वैज्ञानिक समाजवादको भ्रुणको विकास भइराखेको छ । यसले जनताको गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी, प्राकृतिक स्रोतसाधन, जल जमिन, खनिज पदार्थ लगायत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनवादी संस्कृती सहितको परिवर्तन बोकेर जन्म लिनेछ । जहाँ मानव सभ्यताको यात्राले गति लिनेछ र सिंगो नेपाली जनता र राष्ट्रको मुहारमा खुशियाली छाउने छ । यतिमात्र होइन यसले संसारभरिका मानवहरुलाई प्रज्वलित गर्नेछ । र परिवर्तनका लागि हाम्रो मुलुक उदाहरणीय र प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ । यो अर्थमा क्रान्तिमा सवैको सहयोग र सहभागिता पूर्ण रुपले रहने छ ।
नेकपाले क्रान्तिका लागि सहयोग भन्दै गाउँदेखि शहरसम्म,व्यक्तिदेखि कार्यालयसम्म चन्दा आतंक मच्चाएको आरोप छ नि । के यसरी एकिकृत क्रान्ति हुन्छ त ?
म यो विषयमा तपाईको जनप्रिय साप्ताहिक पत्रिका आहा संचार र आहा संचार अनलाइन मार्फत आम जनतालाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु । पहिलो कुरा क्रान्ति आवश्यक छ क्रान्ति संभव छ र क्रान्ति नै जनताको अन्तिम भविश्य हो । यसका लागि सबै प्रकारको सहयोग चाहिन्छ । जहाँसम्म चन्दा आतंकको कुरा छ यो पूरे पुर्वाग्रही सोचवाट केही क्रान्तिविरोधी दलाल, पुँजीपति वर्ग र तिनका गुलामहरुले फैलाएको कोकोहोलो हो । हामीले निश्चय नै सहयोगको लागि अपिल अनुरोध गरेका छौं । स्वतस्फुर्त रुपले क्रान्तिको मर्मलाई मनन् गर्ने अग्रगामी सोच चिन्तन भएका क्रान्तिप्रेमीबाट सहयोग लिएका छौं र यो निरन्तर लिने कुरा भैहाल्यो तर हाम्रो पार्टीको स्पष्ट निर्देशन छ की सहयोग जवरजस्त र वाध्यकारी वनाएर लिनुहुन्न । त्यसैले हाम्रो पार्टीले कहिं कतै त्यस्तो हर्कत गर्ने कुरा छैन र कतै त्यस्तो भएको छ भने हाम्रो पार्टी कार्यालयमा उजुरी वा जानकारी गराए हामी त्यसको छानविन गरि कडा कारवाही गर्न तयार छौं । हामीलाई विश्वास छ । समाजको चेतना स्तर धेरै माथि उठेको छ र हाम्रो पार्टीलाई पनि सहि ढंगले बुझ्ने क्रममा जनताको कतै कमि रहने छैन । त्यहि राज्यबाट भएको चन्दा आतंक गुण्डागर्दी लुटपाटका विरुद्धमा हाम्रो पार्टी संघर्षरत छ जो कुरा सबैलाई सर्व विवितै छ ।
शुरुमा सँगै रहेका र अहिले दुई फरक पार्टीमा रहेका मोहन वैद्य नेतृत्व र तपाईंको पार्टी एकताको लागि तयारी गरिरहेको खवर आइरहेको छ । खासमा यो के हो, केहि आन्तरिक सर्कुलेशन भएको छ ?
हो, हामी क्रान्तिकारी शक्तिहरुसंग एकता गर्न चाहन्छौं । जो हाम्रो पार्टीको नीती हो, सोही नीति अनुरुप छलफल चलिरहेको छ । यतिमा मात्र सिमित नभएर असल कम्युनिष्टहरु, देशभक्तहरु, सच्चा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु र अग्रगमनका पक्षधर विभिन्न तहतप्कामा रहेका शक्तिहरु विचको एकताबाट दलाली प्रवृत्तिको अन्त्य संगै दलाल राज्यसत्ताको विस्थापन गर्न चाहन्छौं । यहि भावको केन्द्रिय अभिव्यक्ति नै एकिकृत जनक्रान्ति हो ।
जनयुद्धकलमा सरकारी सुरक्षाकर्मी वा द्वन्दरत माओवादी सेनाबाट मारिने वाहेक अन्य सामाजिक घटनाक्रमहरु जस्तै बलमत्कार, वोक्सी आरोप, जाँडरक्सीजस्ता विभिन्न विकृतिहरु धेरै हदसम्म रोकिएको विश्लेषण थियो । तर शान्ति प्रक्रियापछि धेरै यस्ता गतिविधि बढेको पाइन्छ । तपाईको पार्टीले सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणमा नतिजा देख्ने गरी किन काम गर्न सकेको छैन ?
सहि प्रश्न गर्नु भयो । हिजो जनसत्ता थियो । आज दलाली सत्ता छ । मूल कारण नै यहि हो । दलाली सत्ताको विशेषता भनेको हत्या हिंसा, बलात्कार, युद्ध, विध्वंस लुटपाट नै हो । जो अहिले चलिरहेको छ । यसको सामाधान दिनकै लागि हामीले एकिकृत जनक्रान्तिको शंखघोष गरेका छौं । यो भित्र साँस्कृतिक क्रान्तिको विषय पनि जोडतोडले उठाइएको छ ।
हामीले जनसस्कृती निर्माण गर्न निकै मेहनतका साथ संघर्षमा जुटिरहेका छौं । देशलाई भ्रष्टाचार, लुटखसोट, अनियमितता र बलात्कार जस्ता कुसंस्कृतीलाई वदल्न विभिन्न क्षेत्रमा कारवाही केन्द्रित गरेका छौं । सवैखाले कुसंस्कारलाई चिर्नका लागि क्रान्तिको अभियान अगाडि बढाएका छौं । यसको मर्मवोध सवैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
अहिले त सिंगो रुकुम जनयुद्ध लडेको माओवादी केन्द्र पार्टीको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारहरु बनेका छन् । रुकुमको सन्दर्भमा त यो सरकारले पनि त जनसरोकारको मुद्धामा काम गर्ला नि ?
हेर्नुहोस् नेपाली समाजमा एउटा चर्चित उखान छ, नायक गुनाको पायक र अर्को सत्य भनाई पनि छ धारामा सफा पानी पिउनलाई मुहान नै सफा हुनु पर्छ । यदि मुहान फोहोरको डंगुरमा डुवेको छ भने धाराको टुटी सुनकै बनाए पनि सफा पानी पाउन सकिन्न भनेझै यो सत्ताको मुहान् पनि फोहरै फोहरले भरिएको छ । त्यसैले स्थानीय सत्ताका प्रतिनिधिहरुवाट धेरै आशा गर्नु वालुवामा फुलफुलाउने सपना देख्नु जस्तै हुन्छ । अहिले देशभरिका स्थानीय सत्ताहरु विकृत बनेका छन् । रुकुमको स्थानीय सत्ताहरुमा पनि यो रोग भाइरल बनेर छाएको छ । नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, लुटखसोट र दादगिरी जस्ता सवै हथकण्डा मच्चाइरहेका छन् । जो कुरा जनताले अप्रिय महशुस गर्दैछन् । यसले हाम्रो पार्टी नेकपालाई पनि गम्भिर र आक्रोषित वनाएको छ ।
अन्तमा केही ?
तपाईंको यो लोकप्रिय संचारमाध्यम सञ्चार अनलाइन र साप्ताहिक पत्रिका मार्फत् सवै रुकुमेली जनता र सिंगो नेपाली जनतालाई क्रान्ति हामी सबैको साझा विषय भएको हुँदा सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग र सहकार्य गर्न अनुरोध गदर्छु । वैज्ञानिक समाजवाद नै जनताको सुन्दर भविष्य हो र यो मानव समाजको सभ्यतालाई प्रस्कृत गर्ने उर्वर प्लेटफर्म हो । सबैखाले प्रतिभाहरु फक्रने फुल्ने साझा फुलवारी हो भन्ने सच्चाइलाई नभुली सवै क्षेत्रका क्रान्तिकारी, कम्युनिष्टहरु, देशभक्त शक्तिहरु र सच्चा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई एकतावद्ध भई एकिकृत जनक्रान्तिकाको माध्यमबाट दलाली सत्ता भत्काउन ढिला नगरौ भन्ने आग्रह अपिल गर्न चाहान्छु र अन्तरवार्ताका अवसरका लागि आहा सञ्चारका सम्पादक तपाई मेगराज खड्कालाई पनि विशेष धन्यवाद ।
Previous articleगाडि ठोकिदा १८ जना घाईते
Next articleरुकुम पुर्वमा नेबिसंघ गठन गर्न केसीलाई जिम्मेवारी
जहाँ पुरुष स्याल र महिला कुखुरा बन्छन (फोटो फिचर)
aahasanchar - February 23, 2018
राष्ट्रियता, देशभक्ति र स्वाभिमान
aahasanchar - September 27, 2019
जेद्दामा खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न